ပန်း, ကျားသစ်, ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်း, သားရေ, ဂျင်း, အထည်အလိပ်, ပတ္တူ - ထုတ်နှင့်အတူဖက်ရှင်လက်ကိုင်အိတ်
ပုံနှိပ်နှင့်အတူအိတ် - 24 အရှိဆုံးဖက်ရှင်မော်ဒယ်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်အဘယ်အရာကိုသူတို့နှင့်အတူဝတ်ဆင်နည်း
တိုင်းအသေးစိတ်တိုင်းမိန်းကလေး accessories များရွေးချယ်ခြင်းကိုအထူးအာရုံစိုကျ, သူတို့ရဲ့လမ်းထွက်စဉ်းစားမိတယ်။ မကြာခဏငယ်ရွယ်မင်းသမီး၏ရွေးချယ်မှုကိစ္စအတွက်ဖက်ရှင် look'u စတိုင်နှင့်မူရင်းပုံပန်းသဏ္ဌာန်ပေးခြင်း, ပုံနှိပ်နှင့်အတူအိတ်ဖြစ်ကြသည်။
ပုံနှိပ် 2018 နှင့်အတူအိတ်
ပြောင်လက်တောက်ပသောပုံနှိပ်နှင့်အတူ 2018 အိတ်၏ရာသီမှာတော့ပန်းသို့မဟုတ်ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်းပေါ့ပ်၏အကြီးမားဆုံး hits တဦးဖြစ်လာသည်။ လူသိများမော်ဒယ်များ, ပြပွဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြယ်နာမည်ကြီးတွေနေရာတိုင်းထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်နှင့်အတူပေါ်လာ, သူတို့ရဲ့အလေးပေး တစ်ဦးချင်းစီစတိုင် ။ 2018 ခုနှစ်တွင်ပန်းပုံနှိပ်နှင့်အတူယခုရာသီအိတ်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ, image ကိုအောင်မယုံနိုင်လောက်အောင်, ဣတ္ကြော့နှင့်ရင်ခုန်စရာဖြစ်ပါတယ်။
ကိစ္စအများစုအတွက်စစ်မှန်သည့်သားရေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဂန္အရောင်အရိပ်နဲ့သတိပညာရှိ stylist ကွပ်မျက်ရှိသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ဿုံအဝတ်အစားမဆိုဆောင်းပါးနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်အပေါ်တောက်ပ "ဆွဲဆောင်မှုရှိသော" ပုံရိပ်လည်းမကြာခဏပေါ်ပေါက်ကြပါဘူး။ ထိုအတောအတွင်းအချို့ stylist နှင့်ဒီဇိုင်နာများအောင်မြင်စွာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်မူရင်းပုံရိပ်တွေကိုအလှဆင်ကြပါပြီ။
Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci နှင့်အခြားအမှတ်တံဆိပ်ကနေ 2018 ခုနှစ် collection များကိုများတွင်ကိုယ်စားပြုထုတ်နှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့သားရေအိတ်။ preference ယခုရာသီပန်းနှင့်ပန်း motif, ရယ်စရာကာတွန်းသို့မဟုတ် anime, ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းညွန်အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့, uncluttered ပဲစေ့တွေဟာနှင့် strips တွေပေးနေပါတယ်။ ရုပ်တုဆင်းတုအများစုမှာခြားနားသောအရောင်အဆင်းအတွက်ဖျော်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မွေခံရသောသူဆက်စပ်ပစ္စည်းမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲယူသည်။
ပုံနှိပ်နှင့်အတူက Canvas အိတ်
ပုံနှိပ်နှင့်အတူရိုးရှင်းသောပတ္တူအိတ်ကအရမ်းမူရင်းကြည့်ရှု, ဒါပေမဲ့သူတို့လုံးဝအဝတ်အစားနှင့်စီးပွားရေးဗီရို၏ဂန္စတိုင်နှင့်အတူရောနှောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထိုထုတ်ကုန်နှင့်အတူ, သငျသညျလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုအဘို့, စျေးဝယ်သွားနိုင်ပါတယ် - သူတို့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလင်းဖြစ်ကြ၏, ဒါဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေမဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ သူတို့အနေနဲ့အထင်ကြီးဝန်ကိုဆီးတားနိုင်ကြသည်ဒါကြောင့်အပြင်, ပုံနှိပ်နှင့်အတူဤအအထည်အလိပ်အိတ်, မယုံနိုင်လောက်အောင်ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ရုပ်ပြသို့မဟုတ်ကာတွန်း၏ရယ်စရာပုံများ, abstraction, ပန်းပွင့်နှင့်အပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို - က Canvas ဆက်စပ်ပစ္စည်းပုံရိပ်တွေအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီတိရိစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များ၏ဤရုပျပုံကိုကြည့်အဖြစ်အမှတ်တံဆိပ်, ဂီတသို့မဟုတ်အားကစားအသင်းများကို။
လူငယ်မိုးပြာရောင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအထူးသဖြင့်နွေရာသီရာသီကာလအတွင်းယင်းအမျိုးသမီးနှင့်အတူမယုံနိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များကြသည်။ အပင်များ, တိရိစ္ဆာန်များ, နှလုံးသားများ, ရယ်စရာရုပ်ပြောင်များနှင့်အများအပြားကပို - သူတို့ကကောင်းကောင်းကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုကြသည်။ ရိုမန်းတစ်စိတ်ဓါတ်များမိန်းကလေးငယ်များ image ကိုတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဣတ္နှင့်ခေတ်မီပေးခြင်း, ပန်းပုံနှိပ်နှင့်အတူဂျင်းအိတ်ခစျြလိမျ့မညျ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ယခုရာသီထပ်မံပန်းသို့မဟုတ်ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်းနှင့်အတူအလှဆင်အလွန်သက်ဆိုင်ရာပုံနှိပ်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်နှင့်အတူလက်ကိုင်အိတ်အားလုံးအသက်အရွယ်များ၏မင်းသမီးအကြားအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကမဆိုအခြားနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိမထားဟာအလွန်အထူးစိတ်ဓါတ်များ၏ပုံရိပ်ကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်ကြသည်။ အခြားသူများဆန့်ကျင်ပေါ်, လျှင်မြန်စွာသူတို့ရဲ့ရာထူးဆုံးရှုံးနေကြခြင်းနှင့်နောက်ခံသို့လည်းညှိုးနွမ်းနေချိန်မှာအတော်များများကပုံစံများ, နှစ်ပေါင်းများစွာသက်ဆိုင်ရာရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ရှိသမျှသောမိန်းမသည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်မျိုးစုံကြားတွင်သူမကြိုက်တယ်အဘယ်အရာကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
တောက်ပခြင်းနှင့်သာအများဆုံးရဲရင့်ခြင်းနှင့် Self-ယုံကြည်မှုမိန်းကလေးငယ်များကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်သောပုံရိပ်၏မျက်စိ-ဖမ်းဒြပ်စင် - ကျားသစ်ပုံနှိပ်နှင့်အတူလက်ကိုင်အိတ်။ ထိုသို့သောအမှုကိုရွေးချယ်ခြင်း, အဲဒါကိုအမြဲဖက်ရှင် look'a ၏အဓိကဒြပ်စင်ဖြစ်လာကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားရပါမည်, ထို့ကြောင့်၎င်း၏သည်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုအလွန်ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသည့်ခံရဖို့ရှိသည်။
ထိုးပြီးဆင်မြန်း, - ဒါကြောင့်မှတ်မိလွယ်တဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းနောက်ခံရိုးရှင်းပြီးလိုရင်းတိုအမှုအရာအပေါ်အကောင်းဆုံးကြည့် ထိုးပြီး pullovers ဒါပေါ်လွင်ပြင်ကုတ်အင်္ကျီနှင့်။ ဥပမာအားများအတွက်ဂန္ဂျင်းဘောင်းဘီ T-ရှပ်အင်္ကျီနှင့်မီးခိုးရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီပေါ်အခြေခံပြီးရိုးရှင်းသောနေ့စဉ်ပုံရိပ်သို့ဿုံမထိုက်မတန်တစ်ဦးပုံနှိပ်ကျားသစ်နှင့်အတူ, အမျိုးသမီးရဲ့ပခုံးအိတ်။
2018 ခုနှစ်တွင် accessories များကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံး hits တစ်ဦးကိုထပ်ဒါ့အပြင်ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်းနှင့်အတူအလှဆင်ပုံနှိပ်နှင့်အတူအိတ်တည်း။ ထိုထုတ်ကုန်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်တောက်ပကြည့်ရှု, ဒါသူတို့သတိမပြုမိမသွားချင်ကြဘူးတဲ့သူတွေကိုမိန်းကလေးငယ်များကိုရွေးချယ်ပါ။ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်းနှင့်အတူမှတ်မိလွယ်တဲ့ stylist ကွပ်မျက်ပခုံးအိတ်လူတန်းစားပေါင်းစုံ, ဖော်ရွေပါတီများနှင့်အလွတ်သဘောထုတ်ဝေကာလအတွင်းသာဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လက်အခမဲ့ခွဲစိတ်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောကိုယ်ဟန်အနေအထားထိန်းသိမ်းရန်ကြောင့်အလွန်အဆင်ပြေ device ကို - တစ်ဦးတက်ကြွတဲ့လူနေမှုပုံစံကိုဦးဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ထုတ်နှင့်အတူကျောပိုးအိတ်-အိတ်။ ဒီထုတ်ကုန်ကျောင်းသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ဆဲနေသောငယ်ရွယ်မိန်းကလေးစုံလင်သည် - ဤအမှု၌မကြာခဏသိသိသာသာအဆင်မပြေဖြစ်စေတဲ့, လေးလံသောအရာဝတ္ထုသယ်ဆောင်ရန်ဆောင်ခဲ့လေ၏။ ဒါကြောင့်အပေါ်အပွင့်ဆောင်ပုဒ်၏ပုံရိပ်နှင့်အတူပေါ်ပြူလာ option ကို, စိတ္တဇ motif, သင်္ကေတအမှတ်တံဆိပ်နှင့် - ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းအပေါ်ပုံစံများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုဘာမှရှိနိုင်ပါသည်။
အမျိုးသမီးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ပုံစံများဖြစ်စေနီးပါးမမြင်ရတဲ့နှင့်တောက်ပနှင့်မှတ်မိလွယ်တဲ့နိုင်ပါတယ်, ကပျောက်ကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးရာမှ။ အဆုံးစွန်သောအဆိုပါမီးမောင်းထိုးအတွက်ဖြစ်လိုသောသူသည်အဆင်းလှသောလိင်, သူတို့ကြိုက်တတ်တဲ့။ ဤအတောအတွင်းထိုထုတ်ကုန်အဝတ်နှင့်ဖိနပ်၏သင့်လျော်သောပစ္စည်းများရွေးဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်သူတို့ကိုအဖြစ် slozhnosochetaemym ဖြစ်ကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်အဓိကမျက်နှာပြင်နှင့်အတူသိသိသာသာခြားနားတဲ့ပုံနှိပ်နှင့်အတူအဖြူရောင်အိတ်, နွေရာသီဆင်မြန်း pastel ရိပ်၏တဦးတည်း, အလင်းအပြာရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူကောငျးမှကြည့်ရှုမည် တစ်ဦး monochromatic ရှပ်အင်္ကျီ တဦးတည်းစတိုင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသို့မဟုတ် ultrashort ဘောင်းဘီတိုများနှင့်ထိပ်, ။ ဒါဟာအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်ပုံနှိပ်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် - သူတို့ဿုံနောက်ခံနဲ့ရောနှောနေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထူးထူးခြားခြားဖော်ပြပါစေ။
အဆိုပါ animalistic ဆောင်ပုဒ်အပေါ်တစ်ဦးပုံနှိပ်နှင့်အတူမူရင်းအိတ်မသာအလွန်စတိုင်ကိုကြည့်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းအချို့အဓိပ္ပာယ်ကိုသယ်ဆောင်။ ဥပမာအားဖြင့်ခွေးများ၏ပုံရိပ်ကိုသစ္စာရှိမှုနှင့်ရိုးသားမှုကိုသင်္ကေတ, တဲ့ပုံနှိပ်ဇီးကွက်နှင့်အတူတစ်အိတ်ပညာနှင့်ထောက်လှမ်းရေး၏အလွန့်အလွန်မြင့်မားသောအဆင့်နှင့်ဆက်စပ်သည်နှင့်အချို့ကိစ္စ၌သတ္တိသက်သေအထောက်အထားဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်ကွဲအာခေါင်၏ပုံစံကိုတစ်ကောက်ကျစ်နှင့်ပရိယာယ်ဖော်ပြသည်။
ထိုသို့သောထုတ်ကုန်အဖြစ်ရှိသမျှသည်အခြားသောအလားတူဆက်စပ်ပစ္စည်း၎င်း၏ပိုင်ရှင်မှအာရုံစိုက်ဒါကြောင့်သူတို့ကအထူးအခါသမယသာဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ပိမဖြစ်သင့်ဒါတောက်ပဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ပုံရိပ် - တိရစ္ဆာန်၏ရုပ်ပုံနှင့်အတူအိတ်ကိုပုံစုဝေးဖို့လုံလောက်တဲ့ပါလိမ့်မယ်သဟဇာတနှင့်ဖော်ပြကြည့်ရှုကြ၏။
တစ်ဦးပုံနှိပ်နှင့်အတူတစ်အိတ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများနှင့်ပုံစံများနှင့်အတူဆက်စပ်ပစ္စည်းကြိုက်နှစ်သက်သူကိုအဆင်းလှသောလိင်, အများတို့သည်လည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုစနစ်တကျဝတ်ဆင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပေါင်းစပ်ဖို့ကိုဘယ်လို, ပေါ်ပေါက်။ တကယ်တော့တစ်ဦးဖက်ရှင်နဲ့စတိုင်လမ်းသို့ fit မှနည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်, သို့သော်, ကကြည့်ဝန်ဖို့မများနှင့်အမှုအရာများ၏အထင်အမြင်အရသာမရှိသောရွေးချယ်ရေးဖန်တီးမရှိစေရေးအတွက်သတိနဲ့လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
ဒီတော့ပန်းထုတ်နှင့်အတူလက်ကိုင်အိတ်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာစတိုင်အစိုင်အခဲဣတ္ဆင်မြန်းတွေနဲ့အကြီးကြည့်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စားဆင်ယင်၏ပနျးပှားကိုမြှအိတ်အပေါ်ထားရှိသူတို့အားအလားတူအလွန်သေးငယ်သော florets ၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏနှင့်အတူအလှဆင်လျှင်, သို့သော်သူတို့အများကြီးမဖြစ်သင့်ပါတယ်မကောင်းတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ပန်းပုံနှိပ်နှင့်အတူအနက်ရောင်အိတ်အဝတ်အစားနီးပါးတိုင်းဆောင်းပါးနှင့်အတူကောငျးမှကြည့် - သင်ပင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝတ်စုံနှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်ချင်တယ်ဆိုရင်။
သင်္ကေတထုတ်နှင့်အတူလူငယ်ထုတ်ကုန်ဖို့ပုံရိပ်ကိုအပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုတက် Pick ပိုပြီးခက်ခဲ။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီ T-ရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်ရှပ်အင်္ကျီတစ် Gothic စတိုင်ဆင်မြန်းခြင်းနှင့်ပုလ်ဖိနပ်မူကွဲအမျိုးမျိုးတို့ကိုအတူထိုထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုးပြီးဆင်မြန်း , ဤကိစ္စတွင်အတွက်လည်းအတော်လေးသင့်လျော်သောပါလိမ့်မည်, ဒါပေမဲ့သူတို့အဖြစ်ရိုးရှင်းပြီးစုံစုံဖြစ်သင့်သည်။
တစ်ဦးထုပ် SOCKS ညာဘက်ဝတ်ဆင်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
အိတ် Donna Karan
Narciso Rodriguez အမွှေးနံ့သာ
ကုဗ zirconia နှင့်အတူရွှေပုတီး
ခွေးအတွက် Pyometra - လက္ခဏာများ
စကျင်ကျောက်ကိတ်မုန့် - စာရွက်
စင်ပြိုင် World - အပြိုင်ကမ္ဘာရှိပါတယ်အဖြစ်တည်ရှိမှု၏သက်သေသာဓက,
Kanye West ဂရမ်မီ၏စီစဉ်ရန်ရာဇသံကိုအပ်
Hydroponics - အန္တရာယ်နှင့်အကျိုးအမြတ်
Harper ကိုဇားမဂ္ဂဇင်းနှင့်အင်တာဗျူးတွင် Bella Hadid အပန်းဖြေ, paparazzi နှင့်သူ၏အစဉ်အဆက်-လေးနက်မျက်နှာအကြောင်းကိုပြောပြသည်
Cytoflavin - အသုံးပြုမှုအတွက်လက္ခဏာများ
ကလေးများ5နှစ်များအတွက်ပဟေဠိ
ကြမ်းပြင် stoneware အုပ်ကြွပ်
မျက်ဝန်း - ဆောင်းဦးအတွက်အစားထိုး
Pikaper - ကသင်၏အသက်တာတစ်ကောက်အနုပညာရှင်အသိအမှတ်မပြုဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်ဘယ်သူနည်း
ပရောဖက်ဟေရှာယ - ဘဝ, အံ့ဖွယ်အများနှင့်ခန့်မှန်းချက်
အဘယ်ကြောင့်ကလေးများ semolina မဟုတ်နိုင်သလဲ
လျင်မြန်စွာ beets တပြင်လုံးကိုချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
တိုးတက်မှုနှင့် Channing Tatum တခြား parameters တွေကို
ဂျင်းလက်ဖက်ရည် - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး